I-PCB Technologies - iPandawill Technology Co., Ltd
Ngaphezu kwakho konke ukucaciswa okujwayelekile kwe-PCB esikunikezayo, iPandawill futhi inikezela ngezinqubo eziningi ezengeza ukusebenza kwamabhodi wakho wesekethe maqondana nokusetshenziswa kwawo okuhlosiwe, noma okusiza ngezinqubo zemihlangano yamazinga amaningi ukunciphisa abasebenzi nokusebenza ngcono ukusebenza ngempumelelo.
Ukukhetha 'ukugoqwa kwegolide elinzima: Izicelo ezidinga amazinga aphakeme onqenqemeni noma ukuxhumeka kwendawo ngokusetshenziswa kweminwe yegolide noma amaphedi wokuxhuma.
I-peelable mask solder: IPandawill inikela ngebanga elingcono kakhulu elitholakalayo lokuthengisa lesifihla-buso se-solder elisetshenziswayo kuzinqubo zokuhlangana ezishisayo eziningi. Isendlalelo sokumelana esisebenzisekayo sisetshenziselwa ukumboza izindawo ezingadayisi ngesikhathi senqubo ye-solder wave. Lolu ungqimba oluguquguqukayo lungasuswa ngemuva kwalokho lushiye kalula amaphedi, izimbobo nezindawo ezithengiseka kahle zesimo senqubo yesibili yomhlangano kanye nokufakwa kwengxenye / isixhumi.
Ama-vias angaboni: Ekwenziweni kochungechunge, imishini ye-laser ukuphela kwezomnotho, kepha hhayi okuwukuphela kwesixazululo esingabakhona. lapho kwenziwa prototyping, umshini wokumba imishini wesimanje kakhulu we-CNC (mechanical) kanye namathuluzi akhethekile amasha ayatholakala ukukhiqiza izimbobo ezibunjiwe zekhwalithi elinganayo nokusebenza okungenani kwezindleko okulinganayo.
Ama-vias agcwalisiwe: Kunezindlela ezimbalwa ezigcwalisiwe ngezinketho zokufanisa imfuneko sakho. I-Vias ingagcwaliswa ngokunamathisela okwenziwe ngensimbi ukuqhubeka, i-epoxy resin yokusetshenziswa lapho i-PCB yakha khona isithiyo esisebenzayo kuzinhlelo zokusebenza eziphephe ngokwedlulele nethusi eligcwaliswe ukusiza ngokushiswa kwamazinga okushisa ngaphansi kwezingxenye ezihambisana nokukhiqizwa kokushisa okwenziwe endaweni ebhodini.
Ukuphrinta kweCarbon: I-Carbon isetshenziselwa oxhumana nabo bekhibhodi ne-LCD nezikhonkwane zokuxhumana. I-lacquer isuselwa kukhabhoni futhi ingasetshenziswa kalula ezindaweni ngenxa yokuqukethwe okukhulu kokuqinile.
Impedance elawulwayo: impedance elawulwayo idingeka kakhulu emkhakheni wezobuchwepheshe be-microwave, ukusakaza, ezempi kanye nezokuxhumana. sisebenzisa kuphela izinto eziqinisekisiwe ezinokulawulwa kwe-dielectric njalo (iDkt) nezici zokulahleka kwe-tangent / dissipation (Df) bese sikhipha isivivinyo esifanele ukufanisa izidingo zakho zohlelo lokusebenza.